DAAWO:Hadii la idilo waxaa loo heystaa Farmaajo”Kheyre&Fahad Yaasiin ayaga ayaa soo abaabulay wadaadada | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA DAAWO:Hadii la idilo waxaa loo heystaa Farmaajo”Kheyre&Fahad Yaasiin ayaga ayaa soo abaabulay...
DAAWO:Hadii la idilo waxaa loo heystaa Farmaajo”Kheyre&Fahad Yaasiin ayaga ayaa soo abaabulay wadaadada
Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo maalmihii ugu dambeeyey cadaadis iyo dhaleeceyn kala kulmayey qaar ka tirsan culimada Soomaaliyeed oo ku eedeeyey inuu inkiray Xadiith saxiix ah ayaa sheegay in hadalkiisa laga bixiyey fasiraad qaldan.
Cabdiraxmaan oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Nairobi ayaa sheegay inuusan marnaba in kirsaneyn xadiith saxiix ah oo laga wariyey Nabi Muxamed CWS, wuxuuna xaqiijiyey inuu rumeysan yahay sax ahaanshaha xadiith-ka oo uu Nabiga ka wariyey saxaabiga Abii Saciid Al-Khudri.
Xadiithkan ayuu Nabiga NNKH ku sheegay in dumarka ay nusqaan ka yihiin dhanka caqliga iyo diinta, kaasoo uu sheegay inuu isaga rumeysan yahay uuna yahay Xadiith sax ah oo laga wariyey Rasuulka CWS.
Balse siyaasi Cabdiraxmaan ayaa sheegay inuu isaga uu dood ka keenay fasiraad ay xadiisthkaas ka bixiyeen qaar ka tirsan culimada, si ay ugu liidaan dumarka, wuxuuna sheegay inay jiraan culumo badan oo islaamka soo maray oo la qabo fikirkiisa ah inuusan marnaba Nabiga xaqirin caqliga iyo diinta dumarka.
Mar uu ka hadlayey cambaareynta iyo xukunka ay ku rideen qaar ka tirsan culumada ayuu sheegay in culimada wadda ololaha ka dhanka ah ay yihiin laba nooc oo culimo ah.
Nooca koowaad, ayuu ku sheegay, inay yihiin kuwa “argagixiso ah oo baneystay dhiigga muslimiinta isla markaasna dadka gaaleysiiya”, wuxuuna sheegay inay kooxdaan kula dagaashan yihiin khudbadihiisa iyo aragtiyadiisa ku dhisan naxariista iyo wada noolaanshaha sidaas darteedna uu yahay dagaalka kala dhaxeeyo mid ku wajahan diinta Islaamka iyo macnaheeda.
Nooca labaad ee ka falceliyey hadalkiisa, ayuu ku sheegay, inay yihiin kuwa mushaar ka qaato dowladda lana dajiyey hoteelo loona adeegsanayo kala aragti duwaanshaha siyaasadeed ee u dhaxeeyo isaga iyo dowladda dhexe sida uu hadalka u dhigay.
Culumada uu sheegay inay dowladda adeegsaneyso ayuu sheegay inuu ka aamisan yahay inay yihiin culumo ku shaqeeyo fikirka dowladda isla markaasna fiirsado lacagtooda.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay in “haddii la dilo ay mas’uul ka tahay dowladda Soomaaliya, oo kusoo kicisay culimo u shaqeysa, si ay u xalaaleyso dilkiisa.”
Previous articleXog Culus: Khilaaf soo kala dhex-galay taliye ku xigeenada booliska DF oo la xaliyey
Next articleVilla Somalia oo walaac ka qabta dhaq dhaqaaqyada uu wado Sheekh Shariif
Maxeey kawada hadlayn saraakiisha Imaaraatka ee Boosaaso soo gaaray iyo Puntland
Yaa ka dambeeyay Dilka maanta loo geestay General Guudle Maxamed Maxaase loo dilay..[Xog]
Wararkii ugu dambeeyay ciidamada DANAB oo la wareegay degaano cusub
Siyaasi ku eedeeyay Dowlada federaalka in Khilaaf iyo kala qeybin ku wado Galmudug
Wasiirrada Jamhuuriyadda Congo oo heli doona mushaarkii noloshooda oo dhan
Qoyska Haweeney Uu Dilay Askari Somali-Maraykan Ah Oo Codsaday Magdhow Malaayiin Dollar
Ra’iisal wasaare Abiy Axmed oo war ka soo saaray Xiisada Soomaalida iyo Oromada
Warkii ugu murugada badnaa oo Mareekanka kasoo yeeray&laba kun kabadan oo hal maalin…